नागरिकता विधेयक र सिक्किमीकरणको खतरा « News of Nepal
नागरिकता विधेयक र सिक्किमीकरणको खतरा
नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा अहिले व्यापकरुपमा विरोध भइरहेको छ । यो नागरिकतासम्बन्धी विधेयक खारेज गरिनुपर्छ । किनभने नागरिकतासम्बन्धी यो विधेयक संसद्बाट पास भयो भने नेपालको राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने ठूलो सम्भावना छ । यो विधेयक खारेज गरिएन भने देश सिक्किमीकरण हुने खतरा बढेर गएको छ । विदेशीलाई नागरिकता दिलाएर नेपाललाई फिजीकरण र सिक्किमीकरण बनाउने खेल भइरहेको छ । यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य कुरा हुन सक्दैन । यो विषयमा हामी सबै नेपाली नागरिक सचेत बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सरकारको पछिल्लो निर्णय राष्ट्रघाती कदम हो ।
संसद्मा छलफलकै क्रममा रहेको नागरिकता विधेयकलाई लत्याएर सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने काम ग¥यो । यो गलत काम थियो । पछिल्लो सर्वोच्चको आदेशपछि यो काम रोकिएको छ । फेरि यसरी नागरिकता बाँड्ने काम भयो भने यसले नेपाल र नेपाली जनताको हित गर्दैन । यसरी चक्लेट बाँडेजस्तो गरी नागरिकता बाँड्दा नेपालको भविष्य राम्रो हुँदैन । अंगीकृतबाट जन्मिएकालाई वंशजको नागरिकता दिनुको कारण के हो ? सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ । विगतका सरकारहरुको जुन गति थियो, नेकपाको नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि भारतकै दबाबमा परेको संकेत देखियो । यो राम्रो संकेत पटक्कै होइन ।
सिडियोले केही दिन धमाधम नागरिकता बाँडे । फेरि पनि नागरिकता बाँड्ने खेल भयो भने भविष्यमा नेपाली जनता नै अल्पमतमा पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । यो खतराको संकेत हो । यही हप्ताभित्र नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने योजना बनेको कुरा पनि सुनिन्छ । वास्तविकता के हो, बुझ्न सकिएको छैन । सर्वोच्च अदालतले सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार नागरिकता वितरण कार्य हाललाई रोक्न निर्देशन दिए पनि सयौंले विभिन्न जिल्लाबाट नागरिकता लिइसकेका छन् । अब त्यो के हुन्छ ? २०६३ को अन्तरिम संविधानलाई हेरेर बनेको ऐन यति बेला विस्थापनको अवस्थामा छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन रहेको छ । त्यसकारण संसद्लाई छलेर परिपत्र गर्नु पनि राम्रो होइन ।
नागरिकतासम्बन्धी यो विधेयक संसद्बाट पास भयो भने नेपालको राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने ठूलो सम्भावना छ । यो विधेयक खारेज गरिएन भने देश सिक्किमीकरण हुने खतरा बढेर गएको छ । विदेशीलाई नागरिकता दिलाएर नेपाललाई फिजीकरण र सिक्किमीकरण बनाउने खेल भइरहेको छ । यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य कुरा हुन सक्दैन ।
नागरिकता विधेयक अहिले ल्याउनु जरुरी नै छैन । नागरिकता विधेयक ल्याउनुको मूल उद्देश्य विदेशीलाई नागरिकता दिनलाई हो । अहिले गरिएको यो खेल विदेशी नागरिक र तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिने हो, जुन राष्ट्रघाती र देश विरोधी छ । अहिले दिन खोजिएको नागरिकता भनेको २०६३ सालदेखि २०६५ सालसम्मको कानुनको आधार हो । नागरिकता दिनै परे पनि ती अंगीकृतका सन्तानलाई नागरिकता दिने भनेको २०८८ सालपछि हो । जो २०७२ सालभन्दा अगाडि नै जन्मेको छ र उसको बुबाको अंगीकृत नागरिकता छ भने उसले पनि १६ वर्ष भएपछि अंगीकृत नागरिकता नै पाउने हो । तर अहिले यहाँ वंशजको आधारमा नागरिकता दिन खोजिएको छ । वंशजका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानलाई वंशजकै आधारमा नागरिकता दिन कसैले रोकेको छैन ।
गृह मन्त्रालयले गत चैत १९ गते वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्न मुलुकभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्कुलर गरेको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको एकल निर्णयअनुरुप गरिएको उक्त सर्कुलर संविधान र नेपाल नागरिकता ऐनविरुद्ध भएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो । नागरिकतासम्बन्धी विषय अत्यन्तै संवेदनशील र महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई खेलचारी गर्नु उचित हुँदैन । गृह मन्त्रालयको सर्कुलरमा नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्दा शैक्षिक वा वृत्ति विकास गर्न नपाएको विषय उल्लेख गरिएको छ । गृह मन्त्रालयको सर्कुलरको उद्देश्य भनेको जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका विदेशीहरुलाई सदर गर्ने र ती विदेशीका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिएर राष्ट्रपतिसम्म बन्ने बाटो खोल्ने नियत भएजस्तो लाग्छ ।
संसारको कुनै पनि मुलुकमा खुला सिमाना भएका ठाउँमा जन्मसिद्ध नागरिकलाई वंशजको नागरिकता दिइँदैन । कुनै पनि मुलुकमा नेपालमा जस्तो नागरिकताको विषयमा विवाद हुँदैन । हाम्रो देशमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि कानुन फेरबदल गरेर नागरिकता वितरण गरिँदै आएको देखिन्छ । वि.सं. २००९, २०१९, २०३६, २०४६ र २०६३ मा नागरिकता बाँड्ने काम हुँदै आएको छ । यसरी जथाभावी नागरिकता बाँड्न हुँदैनथ्यो ।
टोली नै खटाएर नागरिकता बाँड्ने काम गरिएको छ । वास्तवमा नागरिकता यसरी जथाभावी बाँड्ने होइन । कुनै पनि नागरिक बालिग भएपछि कानुनले मागेको आवश्यक कागजपत्रका आधार र प्रमाणअनुसार नागरिकता पाउने कुरा हो । नेपालमा टोली खटाएर वितरण गर्ने भनेको भारतीयका लागि हो । हामीले यो बुझ्न जरुरी छ । नेपालजस्तो देशले नागरिकतासम्बन्धी कानुन कठोर बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारण पनि नागरिकता कानुनमा नेपालले कठोरता अपनाउनुपर्ने हो । तर अहिले त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको अवस्था देखिन्छ ।
नेपालमा हरेकपटकको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको संलग्नता रहँदै आएको देखिएको छ । २००७ सालदेखि २०६२ र ०६३ सालसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने त्यो देखिन्छ । हरेकपटकको आन्दोलनमा भारतले आन्दोलनकारी शक्तिहरुलाई नै सहयोग गर्दै आएको छ । जब आन्दोलन सफल हुन्छ, भारत आफ्नो अभिष्ट पूरा गराउन लाग्छ । भारतको अभिष्ट भनेको नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउनु हो । सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा विलय गराएपछि इन्दिरा गान्धीले नेपाललाई ब्यालेटका आधारमा भारतमा मिलाउने भनेकी थिइन् । यो रअका एक पूर्वप्रमुखले आफ्नो किताबमा लेखेका छन् । नेपालमा भारतीय आप्रवासीहरुको उपस्थिति बढाउँदै लगेर उनीहरुलाई नागरिकता दिलाउने अनि नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएपछि जनमतसंग्रह गराउने खेल भारतले खेलिरहेको छ ।
भारतको दीर्घकालीन रणनीति यही हो । भारत अहिलेसम्म यही रणनीतिमा छ । फिजीकरण र सिक्किमीकरण गर्ने दाउ उसले खेलिरहेको छ । भारतमा १ अर्ब २५ करोड जनसंख्या छ । यो जनसंख्याको एक–डेढ प्रतिशत मात्रै नेपालमा आएर नागरिकता लिन सफल भएमा नेपाली अल्पमतमा पर्नेछन् । नेपालसँग सीमा जोडिएको विहारमा मात्रै ११ करोडको आवादी छ । त्यहाँबाट एक तिहाइ नागरिक नेपाल आए भने के हुन्छ ? यदि नेपाल सरकारले भारतसँगको खुल्ला सिमाना नियमन गर्न सकेन भने भारतीयहरुको चाप हाम्रो देशले थेग्न सक्नेछैन । के भारतमा काम गरेर बसेका नेपालीहरुलाई त्यहाँको नागरिकता भारतले दिएको छ त ? छैन, २०६२ सालमा ऐन बनाउँदा नै ठूलो गल्ती भएको थियो । तर त्यसलाई सच्याउनुको साटो झन् खुकुलो हुने गरी विधेयक ल्याइएको छ । यो विधेयक राष्ट्रघाती छ ।
२०६३ सालमा अत्यन्त विवादास्पदरुपमा जन्मका आधारमा लाखौं अंगीकृत नागरिकता बाँडियो । धेरै भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिएको कुरा पनि बाहिर आयो । यो विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ । त्यसैले शक्तिशाली आयोग बनाएर ती नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ । २०६३ सालपछि बाँडिएका नागरिकताको सबैभन्दा पहिला छानबिन गर्नुपर्छ । नागरिक र अनागरिक छुट्याउनु राज्यको कर्तव्य हो । अब सरकारले नागरिकताका विषयमा गम्भीरता लिनुपर्छ । भारतीय खेल र रणनीति बुझी नसक्नु छ । भारतले जे–जे भन्छ, त्यही–त्यही गर्न थाल्यौं भने नेपाल ठूलो संकटमा पर्ने खतरा छ । अब समयमा विचार गरेर नागरिकता बाँड्ने काम गरौं । हचुवाको भरमा नागरिकता बाँड्न थालियो भने नेपाल सिक्किमीकरण हुने खतरा हुन्छ । अब देश जोगाउने उपाय सोच्न जरुरी छ ।
नर्वेबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ
बोझिलो बन्दै दुई तिहाइ जनमत
राजनीतिक व्यवसायीका बजेटरी मुनाफा
किन चाहिन्छ काउन्सिल ?
नागरिकता नीतिमा नारी
‘सरकारको समीकरण बदल्ने खेल’
आज मेघ गर्जन तथा हावाहुरी सहित..
आज ४ स्थानीय तहमा सार्वजनिक विदा
प्रदेश– १ सरकारले ल्यायो ४२ अर्बको..
कांग्रेसद्धारा गुठी विधेयकविरुद्ध प्रदर्शनः फोटो फिचर
मन्त्री खनालमाथि निगरानी, मन्त्री महासेठ पनि तानिने
कपालको सौन्दर्यमा रेट्रो रिमिक्स
ढल्केबर सबस्टेसन आगामी पुसभित्रै, अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार गर्न सहज हुने
इजरायलबाट मेगा रेमिट सेवा
यस वर्ष ६ सय ४४ जना सगरमाथाको चुचुरोमा पुगे
१३औं सागलाई ५ अर्बको बजेट